Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Nnwale Omicron gara nke ọma na Innova
Ụdị nchegbu dị iche iche nke WHO, ụdị Omicron abụrụla nke zuru ebe niile n'ụwa n'ime izu ndị na-adịbeghị anya, ebe achọpụtara ọtụtụ ikpe na UK.
Innova Medical Group, Inc., onye nyocha ahụike zuru ụwa ọnụ na onye na-achọpụta ihe ọhụụ na onye nrụpụta kacha ukwuu n'ụwa na onye na-ekesa ngwa nnwale n'akụkụ, ekwenyela na nnwale ụlọ ọrụ SARS-CoV-2 Antigen na-achọpụta ụdị Omicron.
Na nzaghachi maka ụdị dị iche iche, usoro gọọmentị ewepụtara n'izu a eweghachila iyi mkpuchi mmanye na England n'ụlọ ahịa na n'ụgbọ njem ọha.
Ọ bụ ezie na ndị na-eme nchọpụta na-arụsi ọrụ ike iji chọpụta ịdị irè nke ọgwụ mgbochi ọrịa na ihe ndị na-akwalite megide ụdị ọhụrụ a, nnwale ngwa ngwa bụ ngwá ọrụ dị oke mkpa iji chịkwaa mgbasa nke nje nke ọma ma nyere aka chebe obodo. Innova ekwenyela na Nnwale Flow ya dị n'azụ dị irè n'ịchọpụta ụdị B.1.1.529 (Omicron).
Innova bidoro nyocha ụdịdị ahụ ka WHO bipụtachara ya na ngwụcha ọnwa Nọvemba yana enwetara nsonaazụ ya na ụlọ nyocha ndị ọzọ.
Ọtụtụ ọmụmụ sayensị yana nyocha ahụike ọha na-aga n'ihu nke nde mmadụ mgbe niile egosila nnwale antigen ngwa ngwa bụ ngwa dị mkpa maka ịchọpụta ndị na-efe efe ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi, ọbụlagodi mgbe ha nwere ike ọ gaghị enwe mgbaàmà nke COVID-19, n'ụzọ. agaghị ekwe omume naanị site na iji nwayo, dị oke ọnụ, nyocha dabere na ụlọ nyocha. Nke a abụrụla ihe dị mkpa karịa na-eso ndụmọdụ mbụ Omicron variant mgbaama nwere ike ịdị nro na ụfọdụ ndị karịa ụdị ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na nje ahụ na-aga n'ihu na-akpụgharị mkpụrụ ndụ ihe nketa ribonucleic acid (“RNA”) iji mepụta ụdị ọhụrụ nwere ike na-efe efe ma ọ bụ karịa, Nnwale Innova's antigen, nke na-achọpụta ọtụtụ protein dị na nje ahụ, na-abụkarị ngwa dị irè karị n'ịchịkwa mgbasa ya. na mbenata elu karịa ụzọ ndị ọzọ, dị ka ule PCR.
Mgbe ejikọtara ya na nnukwu mmepụta nke Innova, ikike nchọpụta dị iche iche nke nnwale antigen ngwa ngwa nke Innova, nke gọọmentị kesara n'ọtụtụ ebe n'ofe UK n'ọtụtụ ihe eji eme ihe kemgbe ihe karịrị otu afọ ugbu a, gosipụtara ọrụ Innova dị ka onye mmekọ dị oke mkpa. nye mba na azụmaahịa n'otu aka ahụ n'inwe ụdị ọrịa na-efe efe karịa.